Ngwaahịa Apple nwere ike iru $ 200 dị ka onye nyocha UBS | Esi m mac
Ngwaahịa Apple nwere ike ịpịa $ 200 dị ka onye nyocha UBS si kwuo
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Noticias, ọtụtụ
Ndị ụlọ ọrụ teknụzụ ndị America na-enwe oge oyi na-ekpo ọkụ ma ọ bụrụ na ị lelee ọnụahịa ngwaahịa. Mmetụta akụ na ụba a na-atụ anya nke ọchịchị North America na-enyere ya aka. Maka Apple ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu, n'ihi na ruo ugbu a afọ Apple eruola 11 oge niile dị elu, na-enweghị na-aga n'ihu, Tuesday ikpeazụ ọ ruru a ọhụrụ kacha na mụbaa ihe karịrị 2% n’ime otu ụbọchị, ruo $ 144,12 na njedebe ụnyaahụ. UBS buru amụma na ngwaahịa Apple nwere ike ịdị n’etiti $ 175 na $ 200 n’afọ ndị na - abịanụ ma kọwaa ya na nyocha nke nnukwu ụlọ ọrụ.
Ihe niile metụtara oge ntozu nke ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ. Ọnọdụ dị mma bụ ịnweta ngwaahịa dịgasị iche iche na ọkwa dị iche iche nke ntozu okè. N'otu aka, iPhone ọhụrụ emegharịrị na njedebe nke afọ, kwesịrị ịchụpụ ahịa nke na-eweta uto na-adigide, opekata mpe n'oge 2018.
Site na mgbe ahụ gaa n'ihu, ekwentị Apple ekwesịghị iwebata ọtụtụ ego ha na-enweta kwa ọnwa. Yabụ ọ ga - abụ ntụgharị nke ọhụụ na:
na Macs na ndị nhazi ọhụrụ, onye ma ọ bụrụ na iji RAM ọzọ. Mkpa ọkụ MacBooks ma ọ bụ a MacPro ume.
na iPads, na atụmatụ ndị ọzọ, ụfọdụ dị nso na Mac.
Apple Watch na njirimara ndi ozo nke mejuputara iPhone na
Apple TV dịgasị iche iche, nke na-achịkwa ọ bụghị naanị telivishọn, kamakwa ụlọ.
Ngwaahịa ndị a kwesịrị "ịmalite" ugbu a na ngalaba ụlọ ọrụ R&D.
Milunovich ọ na-ekwere na dị nnọọ na-abụghị nwere ike ime. Ọ ga-abụ ọnọdụ nke iPhone ọhụrụ anaghị erute ọnụ ahịa nke ndị bu ya ụzọ, ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ nke Apple: Macs, iPads, Apple Watch, erughị ogo nke afọ ojuju nke ndị ọrụ chọrọ. N'okwu a, òkè Apple ga-ere ahịa gburugburu € 125 / òkè.
Mgbe onye nyocha nke UBS Milunovich, na-ewere na $ 200 / òkè dị oke nchekwube ọnụahịa, $ 175 otu òkè dịtụ mfe iru. Mgbe ụfọdụ ihe ndị a:
Ọ ga-abụrịrị na ọnọdụ ị ga-akwụ ga-eru $ 175 / share , uru ahụ karịrị 21% karịa ọkwa dị ugbu a. Nke a ga - achọ ka ego na - aga n'ihu n'ihu. "Ma na a deceleration ọnụego", na-ere nke iPhones, dị ka ndị a nwere ike ịkwụsị na-eto eto, ebe ọ bụ na ngwaahịa ọhụrụ nwere nanị agafeghị oke ihe ịga nke ọma na dịtụ ala n'akụkụ peeji.
Anyị ga-ahụ ka ọnwa na-aga, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ UBS ziri ezi na amụma ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ngwaahịa Apple nwere ike ịpịa $ 200 dị ka onye nyocha UBS si kwuo
Egwuregwu akwụ ụgwọ ndị kachasị ewu ewu maka Mac
Belata oke foto gị na Lossless Photo Squeezer